HAJJ 2016: Cisho ee Gudashada Xajka oo bilaameysa 10 September
HAJJ 2016: 5ta Cisho ee Gudashada Xajka oo bilaameysa 10 September
MECCA- Saudi Arabia- Gudashada Xajka oo ah waajib Islaami ah kasoo kamid ah arkaanta muslimka ayaa sanad walba waxaa magaalada Mecca isugu yimaada malaayiin muslimiin ah.
Sanadka 2016 ayaa noqdey midkii ugu dadka badnaa kasoo gudashadiisa bilaameyso 10 September oo ku beegan maalinta Sabtida soo socota. Maalinta gudashada Xajka bilaameyso ayaa waxaa xaqiijiyey Dowlada Sucuudiga taasoo lagu saleynayo aragtida dayaxa.
Maalinta Sadexaad ee Xajka ayaa muslimiinta caalamka u dabaaldagaan Ciid Adxa.
Xajka ayaa bilowda maalinta Sideedaad ee Bisha Dhu al-Hijjah sanadka Islaamka isagoo dhamaada maalinta 13aad ee Isla bishaan.
Gudashada Xajka iyo shuruuda gudashiisa ayaa dadka Muslimka ah laga rabaa in muddo Shan Cisho ah kusoo dhameystiraan.
Hal milyan iyo bar Muslimiin ah oo Carafo taagan
Islam 11.09.2016. 11:56
Ajarka ku jira Cibaadada la sameeyo Tobanka maalmood ee ugu horeeya bisha Dul Hajji
Islam 06.09.2016. 06:51